I-HTC isungule i-10 evo, inokuthengwa kwi-intanethi kuphela | Iindaba zeGajethi
Kule mihla idlulileyo amarhe malunga ukuthengiswa okunokwenzeka kwecandelo leHTC. Lo mvelisi waseTaiwan akakho ngokusemgangathweni, kwaye nangona emva kokukwazi ukuvelisa iGoogle Pixel enkulu efumene ukuphononongwa ngokukhawuleza apho ifumaneka khona.
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo I-HTC isungule iBolt eMelika kuphela i-Sprint yase-US. Okokugqibela, loo fowuni iya kuba isasazwa kwihlabathi jikelele, okwangoku eYurophu, phantsi kwegama le-HTC 10 evo. Le inezinto ezifanayo ezifanayo kwimbonakalo ebonakalayo, nangona isebenzisa ezinye iinkcukacha ngokubhekisele kwipremiyamu.
Yi-HTC ngokwayo eqhayisa ngobuchule bayo bokumelana nomfanekiso obonisa kakuhle ukuba ugcina njani amanzi, enkosi kwi-IP57 certification. Phakathi kwezinye zezinto ezintle esinokuthetha ngazo inzwa yeminwe okanye i-8 MP yekhamera yangaphambili enendlela ye-panoramic selfie. Kwaye ayinayo i-Android 7.0 Nougat, Kukulunga okukhulu xa ujonga ukuba abanye abavelisi bahlala njani kwi-6.0 Marshmallow.
Enye yeenkcukacha zayo Uhlobo oluhambelana ne-USB-C yentloko; oku kuthetha ukuba ikhutshiwe kwijack yeaudio. Ikwabandakanya itekhnoloji ye-BoomSound ukuziqhelanisa ngokuzenzekelayo nengxolo / isandi esime.
Ngokumalunga nezona nkcukacha zibaluleke kakhulu, sine-3 GB ye-RAM, i-32 GB yememori yangaphakathi kunye nefayile ye- I-octa-core chip Snapdragon 810. Ewe, leyo yaba yinto embi ye-HTC engaphantsi kweminyaka emi-2 eyadlulayo. Kwicala lebhetri, ine-3.200 mAh kunye nekhamera ye-16 MP ngasemva ene-f / 2.0 ukuvula kunye nokufumanisa isigaba se-autofocus.
Uyilo, njengoko kusitshiwo, kujongeka ngathi yiHTC 10, ke uya kuba nayo kunye nayo ubuchule obukhulu bokubona Ngesi-5,5-intshi Quad HD screen.
nokuVavanyelwa ayinxulunyaniswa nawuphi na umsebenzisi eYurophu, inokuthengwa kwi-Intanethi ukuba uyayifuna ngokwaneleyo. Ngale nto, umenzi waseKorea uyenza icace gca: ijonge kubasebenzisi abathenga iifowuni zabo ngqo ngaphandle kwezivumelwano. Asilazi ixabiso laso, ke iya kuba yinto yokulinda kancinci, njengokufumaneka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-HTC isungula i-evo ye-10, uguqulelo lwehlabathi lweHTC Bolt
IMicrosoft yehlisa ixabiso lemodeli yokungena yeNqanaba leNcwadi